लौ है! गालि बेइज्जती गर्ने १५ वर्षपछि पक्राउ | PARDAFAS
Posted: July 15, 2015 in PRIVATE
KATHMANDU: प्रहरी तगडा छ नेपालको । २०५७ सालमा ब्यवस्था बिरुद्ध बोल्ने एकजना दलितलाई कारवाही गर्ने आधार नभेटिएर चलाईएको गालि बेइज्जती मुद्दाका दोषीलाई १५ वर्षपछि पक्राउ गरेछ । हुन त प्रहरीले आफ्नो कर्तब्यपालना गरेको हो । तर अचम्म त सर्वोच्चको रणनीति अनुसार अदालतका फैसला कार्यन्वयन गराउन दस्ता नै गठन भएको छ । अदालतका कर्मचारी प्रहरी सम्मिलित दस्ताले समेत गर्न नसकेको कार्य ईलाका प्रहरी कार्यालयले गरेछ । त्यसो त सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलामा थुप्रै कैद भुक्तान र जरिवाना असुल गर्न बाँकी नै छ । तर बुधबार अचानक गालि बेइज्जती मुद्दामा रुपैयाँ ५०० जरिवानाको फैसलामा फरार रहेका एकजना ६२ वर्षिय दलितलाई घरबाटै पक्राउ गरेको छ । यहाँ तपाईलाई लाग्दैन दालमा कुछ काला है वा पुरा दालनै कालो हो । पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई सोध्ने मन थियो । तर सकिन क्षमा चाहन्छु । फ्लोअपमा उनका कुरा सुनाउला है ।
अहिलेको कुरो चाही !
सुुर्खेत प्रहरीले गालि बेइज्जती मुद्दामा दोषी ठहर भएर फरार रहेका अभियुक्त १५ वर्षपछि पक्राउ परेका छन । सुर्खेत जिल्ला अदालतको २०५७ फागुन १४ गतेको फैसलाअनुसार गाली बेइज्जती मुद्दामा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएका एकजना फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले उनकै घरबाट पक्राउ गरेको हो । ईलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुले फरार प्रतिबादी सहारे गाबिस–६ बस्ने ६२ वर्षीय मनवीर कामीलाई बुधबार उनकै घरबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका कामीलाई प्रहरीले सम्मानित सुर्खेत जिल्ला अदालतमा दाखिला गरेको छ
छैन त गजब्ब !
तपाईलाई के लाग्छ ? भोट गरौ न है ।